Senator Naciima “Waxaan wadnaa qorshe lagu soo saarayo Sharci ka hortaga Tacadiga Dumarka” – Kalfadhi
Senator Naciima “Waxaan wadnaa qorshe lagu soo saarayo Sharci ka hortaga Tacadiga Dumarka”
Naciima Ibraahim Yuusuf, oo katirsan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegtay in Haweenka ku jira labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya ay wadaan qorshe lagu diyaarinayo Sharci ka hortaga Tacadiga Dumarka ee ka jira meelo badan oo kamid ah Soomaaliya.
Waxay in Haweenka Soomaaliyeed ay laf dhabar u yihiin nolasha oo dhan iyo horumarka dalka ayna jiraan Tacadiyo loo geesto, Xildhibaanada Dumarka ah ee ku jira Baarlamaanka Soomaaliya ayey sheegtay in arintaan ay ku howlan yihiin sidii xal loogu heli lahaa. “Waxaan idiin sheegayaa in aan wadno sharcigii difaaci lahaa haweenka Soomaaliyeed, ma ogolaan karno in Dumarka la dhibaateeyo” ayey tiri Naciima Ibraahim Yuusuf oo katirsan Aqalka Sare.
Senator Naciima IbraahinYuusuf, ayaa sheegtay Tacadiyada Dumarka in ay isugu jiraan laba nuuc oo ah dhib loo geesto iyo mid ay isu geestaan oo qaarkood ay gacmahadooda isku dhibaateeyaan. Dhibaatooyinka loo geesto ayey ka xustay Kufsi, Jirdil iyo Dil intuba, waxay kaloo sheegtay in aysan jirin cid baarta dhibaatooyinka ay wajahaan Haweenka Soomaaliyeed.
“Dumarka waxaa loo geestaa Kufsi, Jirdil, iyo Dil, ayaa wax u qabta? Sharci maka yaalaa ? waa maya” ayey tiri Xildhibaan Naciima Ibraahim. “Waxaan u baahanahay in aan soo saarno Xeer naga qabta dhibkaas oo dhan, waxaa kale oo jira in Annaga aan dhibaato isu geysano, waxaan codsanayaa in aan iska bilaawno Joojinta dhibaatooyinka dhaxdeynna ah” ayey hadalkiisa sii raacisay Senator Naciima Ibraahim.
Dhinaca Kale Naciima Ibraahim Yuusuf oo Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya katirsan ayaa ka hadashay arimo quseeya Gudniinka Fircooniga ah dhibaatooyinka lagu qabo. “Gudniinka Fircooniga ah waa qayb kamid ah Tacadiga aan wajaheyno, Diintayna kuma taalo ee yaanan jar-jarin jirka Awlaadeyna” ayey ka sheegtay goob Xaaladda Dumarka looga hadlayey oo ku taala magaalada Muqdisho.
Sanatar Naciima Ibraahin Yuusuf, waxay ku amaantay Haweenka Soomaaliyeed in ay yihiin kuwa dadaala oo adkeysi badan, maadaama ay u dul-qaateen dhamaan duruuficii adkaa ee dhanka nolosha ahaa, waxa ayna ku bogaasisay in aysan ka aamusin dhibaatada haysata xiligaan si xal loogu helo dhamaan Tacadiyada Dumarka.
Reysal Wasaare ku xigeenka Soomaaliya “Mucaaradka waxay arkaan oo kaliya Xumaanta ee Wanaaga ma arkaan”
Xildhibaan Mukhtaar ” Fuustadii Biyo ah Sh/dhexe waxay gaartay 200 oo Shalin Soomaali ah dadkana ma awoodaan”
Xildhibaan Mukhtaar " Fuustadii Biyo ah Sh/dhexe waxay gaartay 200 oo Shalin Soomaali ah dadkana ma awoodaan"